"Phakamisa ayisebenzi" - uzovuma, akuyona kumnandi ukubona lolo phawu emnyango ezitebhisini. Ngisho labo abahamba ekukhanyeni, futhi uzuze ngokwengeziwe uma ungumntwana noma ezisindayo izikhwama. Noma yini kodwa baphanga kwemizwelo, ubuso ngobugebengu ikheshi, futhi yini izindlela ukuxazulula le nkinga?
Ngokuvamile ikheshi okuyiphutha kungaba yingozi. Ngokwesibonelo, e Cherepovets ngenxa ke cishe wahileleka engozini nengane eneminyaka emibili. Uyise wathi wayezomvusa nendodana yakhe sishaywe futhi wayeya ukuletha sabakhubazekile ku ikheshi. Kodwa ngaphambi kokuba ucindezela inkinobho njengoba idivayisi yahamba angesabi. Elevator zaqala ukwehlela, ubambe stroller emkhatsini phansi kanye ophahleni cab. Kwaziqondanela nje ukuba bajabule, abahambisi bosizo babekhona eduze, futhi stroller senziwe unembeza. Ingane alilimalanga, kodwa uthole bamkhiphe imbeleko ngayinyomfoza ngayiphosa ephethwe lula.
Kwaba ngemva kwezigigaba ezifana nalezi, ngeshwa, futhi iphakamisa imibuzo mayelana nokuthi kungani lift akusebenzi, khona sikhalo sakho nokuthi bayinikela kubani. Ngaphambi kwalokho emagunyeni afanele musa noma ucabange ukuxazulula le nkinga. Lesi simo sengqondo budedengu emsebenzini Yiqiniso, kufanele ajeziswe, futhi ikheshi - ukushintshwa.
Imboni ngokwayo usuphelelwe zommbila yisikhathi. Ikakhulukazi simo esidabukisayo kuyinto ezindaweni. Ngisho liftoviki ucela izakhamizi yendlu ukubika yonke imininingwane ezihlobene ukungasebenzi noma ukusebenza kudivayisi osolisayo. Kungcono waphinda uhlole konke futhi silungise izinkinga ezincane, kuka ukuvalelwa noma ukubhekana nemiphumela yaleso esiphuthumayo.
Ngokwezibalo, kuzo zonke eMoscow Uphakamisa serviceable ngokugcwele kuphela ikota. Ngenxa crisis kuze kube muva nje iziphathimandla umane kwakungenakwenzeka ukwaba izimali ngenxa ukukhanda zommbila nezinqubo ezikhona kanye izakhiwo nje saveza ngempahla yabo. Ngemva abakhipha lwezimali 2011 ukuze isimo embonini lithuthukile, kodwa kuphela inhloko-dolobha. Ezindaweni zommbila usasebenza, njengoba besho, ukuze umkhawulo. Abaningi babo iminyaka engaphezu kwengu-25. Kodwa abadala nanoma yikuphi ukukhishwa, ayanda amathuba ukwehluleka.
Ngokusho abamele "Moslift" izikhalazo ezingenziwanga isevisi lift endlini, beza njalo. Abaqashi Ziningi akhononde ngokuthi: endlwaneni eyakhiwe eyeka ngokuzumayo, ke unikina kakhulu ngenkathi ezihambayo, iminyango ivula futhi iphethe umzamo. Futhi lezi izikhalazo, bathi, ukusiza ukuxazulula lezi zinkinga. Ngakho-ke, uma uqaphela ukungasebenzi, unganqikazi ngokushesha memezela it ukuba inkampani kubaphathi noma kuMphathi.
Liftoviki ngokwabo kangcono waphinda izohlola kusayithi lakho ekuphepheni kuka ngeke kamuva umuzi onotshwala. Ngakho ukuthi abagibeli bathi kuphela siyojabula. Futhi umqondisi "Moslift" usho kuphela ikheshi lapho isikhathi sonke amasheke abazenzi kanye nomsebenzi wesondlo kungaba ephephile ngokuphelele ukunyakaza.
imithetho yokuphepha futhi elula
ERussia kukhona inhlangano ekhethekile ekubhekaneni lezi zinkinga - ". Russian lift inhlangano" Ngokubona kwakhe, kufanele noma faka isilawuli ezingeni likazwelonke, noma ukuxazulula nobunzima ukuzithiba yimboni. Ekugcineni, indima ebalulekile eyadlalwa ukuphepha abuye abe nelikhono lekusebentisa kahle ikheshi.
"Ngubani akamazi lo?" - Ungase uthi. Empeleni, ngalolo ikheshi akusebenzi, babekwe icala abagibeli ngokwabo. Ngokwesibonelo, babambane ngezandla lapho ukuvala umnyango - futhi lokhu kuholela ekuphelelweni nokuncipha kwesikhathi isethi wokusebenza. Liphinde wawukwenqabela iphuma ku ukuthutha ikheshi nengane: isisindo sabo alanele ukuze yenze fuse, futhi lokhu kungaholela ingozi. Kungcono ukuthatha ingane ezingalweni zakhe, futhi stroller ukuthi unikezele ngokwayo ngemva kokuba wangena ikheshi. Uma uphume okudingeka uyenze izinyathelo ezifanayo kodwa oda reverse.
Kafushane, ikheshi libhekwa njengoba izimoto yingozi, futhi lokhu Qiniseka ukukhumbula bonke.
Indlela ukuqaphela inkinga?
Mayelana isimo eliphansi lift indlela kungaba i-signal ezicini eziningana. Uma izimpawu "Phakamisa ayisebenzi" ungazange ngimbone, kodwa ngokushesha endlwaneni eyakhiwe waqala ukuthutha uze inkinobho, it is ukukhuluma kakade mayelana amaphutha akhe. Ngakho, izindlela ivimbela awahlelanga, futhi ukuze kugwemeke izingozi, kufanele ngokushesha azise dispatcher.
Akufanele ngibe ikheshi noma kunjalo ukuze uqale ukunyakaza phambi iminyango ivaliwe. Uma kungenjalo iphutha kukhonjelwe izinhlawulo lobugebengu, futhi Rostekhnadzor sizodingida necala. Lona Ngokwesibonelo ezimbi nakakhulu, badinga ubuze ikheshi - ukuze umsebenzi akekho umuntu ukubhekana kangcono.
Ubani odinga ukwenza ukulungiswa?
Uma kungenjalo lift, lapho ukubiza nokubhala? Kulokhu, sicela uxhumane nomphathi wenhlangano inkonzo. Zibandakanye ukulungiswa lift kungaba ehhovisi izindlu zendawo noma amalungu abaqashi bakho wokubambisana noma inhlangano ngokwabo. Kunoma ikuphi, isici Kusolakala kumelwe iqedwe ngokushesha ngangokunokwenzeka - emahoreni angu-24 emva isikhalo sitholakala. Hhayi ikheshi futhi ekhalendeni - impelasonto noma iholidi? Shayela zezinsizakalo zesimo esiphuthumayo komuzi, kuba isiqiniseko ukuthi uzosisiza.
Futhi uma inkinga ayinqumanga?
Elevator uyaqhubeka wenqaba ukuba sithwale abaqashile, nakuba kube ngemva kwezinsuku ezimbalwa isicelo? Khona-ke ukubhekana isikhalazo esibhaliwe inhlangano ngokwayo, ukusizakala umnotho. Izinsiza kumele aqukethe hhayi kuphela impahla yomphakathi ihlanzekile, kodwa futhi njengoba kudingekile ukuba afeze ukulungiswa.
Inkampani ukuphathwa lizophinda likutshele ukuthi kungani singeke sihlasele. Ngokwesibonelo, lift okuyiphutha indlela - kuzodinga luhlolo kanye indawo yonke imishini. Imibuzo enjalo kungukuthi zihleliwe kakade Tinsita, kodwa ngabo futhi, wena bebophekile ukuba ubike.
Kodwa uma isikhalazo sakho ngokubhala sizibiwe ke xhumana Ngokwesibonelo kakhulu - Ukuphatha RTN. Phela, futhi kwenzeka ukuthi inkampani ukuphathwa uthembisa ukulungisa ikheshi, futhi yena kuphela eyeka umsebenzi wakhe, unamathelise gumbi. Kungaba amasonto noma ngisho izinyanga, kuze abaqashile ngeke baphendukele Rostekhnadzor. A ngokushesha ihhovisi lomshushisi kangcono, futhi.
Kanjani ukuze wenze isikhalazo esibhaliwe?
Ngakho, ikheshi akusebenzi, sizoyaphi, niyazi, kodwa ungakwenza kanjani lokho? Into esemqoka lapha - ukwethula amaqiniso eziphathekako ukunikeza nezinsuku ngqo. Kungcono ukugwema imizwelo lapho ebhala nalapho imininingwane ezincane. Kungenjalo, athole umnyombo yenkinga yakho ngeke kube lula.
Yezikhalazo ukuba ikheshi ephukile kungaba kokubili ngamunye nanjengeqembu. Kodwa noma kunjalo, kumele kusekelwa imibhalo abanekhono futhi olufanele njengoba kudingekile.
Amaphuzu ukuthi ube isitatimende:
Requisites. Lapha ucacise ikheli yendlu, ekamelweni yokungena kanye efulethini izinombolo. Bhala imininingwane yenkampani, okuyinto isicelo ukuze ucacise igama umholi wayo. Konke lokhu - cap okuthiwa, esemgwaqweni ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Igama. Kulokhu isikhalazo, isimangalo noma isitatimende. Kutholwe phakathi nendawo ishidi.
Ingqikithi le nkinga. Kusobala: ikheshi ayisebenzi futhi akekho ohambayo ukukulungisa ngokushesha. Ungakwazi ukwethula izimangalo zabo, elisekelwa izinto zawo uMthetho Wokuvikelwa Kwabathengi.
Imithetho neziqondiso. Ubathola lapha, futhi, ngeke kube engadingekile - kwezinkambiso elawula ukuqaliswa yonke imisebenzi ehleliwe ezihlobene nomsebenzi we-ikheshi. Ngokwesibonelo, usuku okwaqala yayo enkonzweni noma izinkathi Kulindeleke ukulungiswa.
Umcabango futhi isicelo. Kuyadingeka ukucacisa isisekelo okwakhelwe kuso lolu daba kumele ukubhekana yinkampani ukuphathwa, kanye ukwethula isicelo sakhe.
Ungene, yango. Uma isikhalazo yenziwe bebonke, izisayindo zabo kungenziwa kuphela ukubeka izakhamizi ngokomthetho kuleli kheli.
Isicelo. Lezi zihlanganisa kumadokhumenti kuqinisa lokho ayekushilo.
Lungiselela isitatimende ngeduplikhethi. Okokuqala ake ithunyelwa uya khona, kanti eyesibili - igcinwe kuwe.
ikheshi engesiyo - ubufakazi ukwephulwa izimo nezidingo zokuphepha. Izakhamuzi ekhaya kukhona abathengi izinkonzo ezenziwa inkampani ukuphathwa. Ngakho uma la masevisi awatholakali kubo ngokugcwele, ungakwazi futhi bakhononda kusevisi Federal.
Emacaleni angu-eziphambili kakhulu, uma ikheshi liyadingeka ukulungiswa ezinkulu, lokuxazulula inkinga kungathatha isonto. Phakathi nalesi sikhathi, ke Umbuso indawo kuyokwenza recalculate abalimi. Ngoba indlu efulethini ngasinye, usuku ngalunye Ukuphumula, kukhona ruble mayelana 5, uma konke lokhu ikheshi ukusebenza. Ukuguqulwa kuzokwenziwa ngemuva isicelo esibhaliwe inkampani ukuphathwa. Futhi uma ungenawo ukuqeda umonakalo isikhathi eside, ngezidingo zomphakathi kufanele ukhokhe isigwebo esibi kakhulu - emashumini ezinkulungwane ruble.
Zangasese zomphakathi: incazelo kwezinhlobo. zangasese zomphakathi e Moscow
Izikhukhula Bulgaria. ukulahlekelwa
Kukangaki ungenza ingxenye cesarean? Ngokusho odokotela
Ukutholakala kwesifo ekuqaleni kanye ngasekupheleni entwasahlobo izimbali